8 iziqholo ezikhethekileyo zale ntwasahlobo | Amadoda aQinisekileyo
ULucas garcia | | yokuPhila, Iifumba
Iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba kufike usuku lukaTata, zininzi izinto ezityikityiweyo Basebenzisa ithuba lokuphehlelelwa kwabo ngevumba elimnandi kule Ntwasahlobo ka-2014 kunye nokusebenzisa ithuba lokudibana nomhla okhethekileyo kubazali abanjengalo. Ke namhlanje ndiza kuthetha ngayo 5 ezona ziqholo zivumbuluka kwezi ntsuku zasentwasahlobo zizayo kwaye basisipho esifanelekileyo soSuku lukaBawo.
1 1. IBoss Bottled Unlimited
2 2. Mnumzana Kuphela nguGivenchy
3 3. Acqua di Giò nguArmani
4 4. SpiceBomb nguViktor noRolf
5 5. Kenzo Homme nguKenzo
6 6. UbuGcisa boHlelo lweLa Nuit de L'Homme
7 7. Amadoda nguThierry Mugler
8 8. Azzaro Phalaza Homme
1. IBoss Bottled Unlimited
Ungena uhlobo oluphelayo kwaye iyafumaneka ukusukela kule nyanga kaMatshi. Livumba elinamandla nelikhuthazayo elijolise kubantu bezemidlalo abanevumba elitsha nelitsha. Ngaphakathi sifumana amanqaku aluhlaza afana ne-mint ehlaziyayo, igqabi le-cistus, ipayinapile enamanzi kunye neenkuni, ezenza iziqholo zibe lelona vumba lihle nelomeleleyo. Sele ithengiswa ngeendlela ezimbini. I-100 ml ye- € 81 kunye ne-50 ml nge- € 62.
2. Mnumzana Kuphela nguGivenchy
Ukumkanikazi ngeziqholo zomthi kule ntwasahlobo. Amadoda ahloniphekileyo aguqulela kuphela isiqholo sobudoda besintu esinikezela ngemeko eyahlukeneyo yothando kunye neo-romantic apho sifumana khona ii-aroma ezinje nge-mandarin eluhlaza, amajikijolo apinki, i-nutmeg, igqabi le-birch kunye nemvelaphi yayo, i-trilogy yemithi emihle eyenziwe ngumsedare, i-patchouli kunye nevetiver, ngeentetho ezomeleleyo nezithakathayo zesiqhumiso. Iza ngefomathi ye-100 ml kwaye ixabiso layo yi- $ 59.
3. Acqua di Giò nguArmani
Yinto ephambili yokunxiba engapheliyo. Ivumba lesiqhelo, elihle kwaye lilula, kodwa ngaphezulu kwako konke ukungaphelelwa lixesha kwaye kungoku nje. Intsha kakhulu kwaye igqibelele kulo Ntlakohlaza. Inceda ekuvuseleleni imvakalelo yokubulela kwiingcebiso zayo zeCalabrian bergamot, jasmine kunye nenkungu ekhanyayo yolwandle. Ngoku ngoSuku lukaBawo luza kwibhokisi ekhethekileyo kwifomathi eyi-100 ml nge-20 ml yokuhamba yokutshiza.
4. SpiceBomb nguViktor noRolf
Livumba lamva nje elivela kuViktor noRolf kwaye igcwele umahluko kunye nemfihlakalo, kwaye kwangaxeshanye inobuqili kwaye inomdla kakhulu. Ngaphakathi sifumana ibhombu yonke ye-citrus, ipepile kunye nepelepele, inamanqaku esikhumba, icuba kunye nevetiver. Itsala umdla ngaphakathi nangaphandle kwaye ijolise ngakumbi kwindoda enesibindi efuna ivumba elahlukileyo. Ngemini kaTata a Inguqulelo ye-150 ml egcina uyilo lwayo loqobo.
5. Kenzo Homme nguKenzo
Uqalo yinkwenkwezi yokwenene Eli phunga linamaphepha aqholiweyo eline-nutmeg, ipine kunye nentliziyo yomsedare enemvelaphi yenyama: iSandalwood kunye neCista Labdanum. Kukulungele ukubalekela kude kude.
6. UbuGcisa boHlelo lweLa Nuit de L'Homme
Omnye Ivumba eligcwele ukukhanya kunye nezithunzi ezizele kukutsha kunye nobushushu ngaxeshanye apho i-cardamom kunye ne-bergamot zezona protagonists zokwenyani kunye nokuchukumisa i-coumarin kunye ne vetiver edibanisa intliziyo entle yomthi womsedare. Alithandabuzeki elokuba sisiqholo somthi esinomlinganiso onomtsalane nothandekayo. Ngomhla kaTata, ivumba elimnandi liba likhethekileyo kwaye lahlukile kumbulelo wangaphandle ku-Gardar Eide Einarsson, owenza u-Yves Saint Laurent ahloniphe iziqholo zakhe zamadoda amabini -L'Homme kunye neLa Nuit de L'Homme -, ukuyila ngokutsha uhlelo olunomda iibhotile zigqunywe ngokukodwa ezimele ubudoda beli xesha.
7. Amadoda nguThierry Mugler
Isiqholo sikaT Thierry Mugler sasemzini. Yaziswa okokuqala kwi-1996, yahlengahlengiswa kwiimfuno zomntu ngamnye kuthi ukutolika ivumba leengelosi laBasetyhini. yoSuku lukaTata kukho ushicilelo olukhethekileyo olubandakanya ivumba lalo elimnandi kwi-100 ml, iinwele kunye ne-Body Shampoo kwi-50 ml, kunye ne-deo Stick yayo kwi-20 ml, nge- € 72,50.
8. Azzaro Phalaza Homme
Ngomnatha okhethekileyo I-lavender, i-basil kunye namathontsi ambalwa e-bergamot, i-lemon emuncu kunye ne-patchouli kunye ne-amber, musk, isikhumba kunye ne-sandalwood, U-Azzaro ubekwe njengendawo enobudoda kunye namandla anamandla. I-classic ebisoloko yenza indawo ngalo lonke elixesha kwaye ngoSuku lukaTata iboniswe kwibhokisi ekhethekileyo ebandakanya ivumba layo elimnandi kwi-50 ml, kunye ne-Deo Stick, zonke ziyi- € 48,50.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » 8 iziqholo ezikhethekileyo zale ntwasahlobo
Iindidi ezahlukeneyo zezinto zokupholisa umoya kwiziko lewayini
Iindlela ezintathu zokunxiba isikhafu ngeli xesha lonyaka